JingDE inogona kuve nyowani Linux desktop | Linux Vakapindwa muropa
JingOS "haisi sisitimu inoshanda." Tichaona JingDE munguva pfupi?
Pakutanga kwegore tinotaura newe kubva kuJingOS, yeLinux-based operating system iyo yatakaziviswa senzira huru yemapiritsi. Gare gare vakatitaurira kuti vaizovhura iyo JingPad, piritsi raizoshandisa JingOS uye iro raizove neakanyanya Hardware kupfuura iyo PineTab, uye inogona kutoyedzwa pamahwendefa eX86 nemakomputa. Nhasi, muboka reTeregiramu reprojekti, ndataura chimwe chinhu: JingOS «haisi yekushandisa system, idesktop uye mamwe maapplication«. Mune mamwe mazwi uye zvichishandurwa muchiSpanish, ndizvo zvatinoziva pano se «dhesiki», ndosaka mubvunzo uchimuka: pachave jingde mune ramangwana?
Kana iwe uchitsvaga JingDE muGoogle (kana zvirinani muDuckDuckGo), izvo zvaunowana zvichave zvinhu zvine chekuita neChina, asi hapana che "Desktop Nzvimbo", zvinova zvinorehwa neshoko rokuti DE. Iko hakuna chinhu chine hukama neLinux desktop nekuda kwekuti ishoko rakagadzirwa rechinyorwa chino: kana iyo system, isiri system maererano nevanoigadzira, iri JingOS, OS iri chirevo cheYakashanda Sisitimu, tafura inogona kunzi JingDE, kuti kana yakambovapo.
JingDE inogona kuiswa seGNOME kana Plasma ... kana yakambovapo
Asi chinhu chimwe chinofanira kujekeswa. Mugadziri wechidiki ari chikamu cheiyo KDE chirongwa, Niccolo Venerandi anga ari iye akataura kuti JingOS haisi sisitimu inoshanda, asi nekuti inomhanya paUbuntu, iyo ingave iri yekushandisa system.
Naizvozvo, mushure mekuverenga mazwi aVerandi, ndakave nekusahadzika uku kwataigona kuona mune ramangwana. Kana zvaizoitika, JingDE, kana chero chaunoda kuchidaidza, inogona kuiswa pane yedu yekushandisa system sekugona kwedu kuisa Plasma muManjaro XFCE, semuenzaniso. Izvo zvinofanirwa zvakare kuve nyore kusarudza pakati pegrafiki nharaunda uye izere desktop, iyo zvakare inowedzera iwo wega maapplication e JingOS.
Ndiri kuziva kuti timu yeJingOS / Pad yekuvandudza iri kugara ichiongorora izvo zvinoburitswa nezveyako uye piritsi, saka handingashamiswe kana ukaverenga chinyorwa ichi nezve chimwe chinhu chavasina kumbotaura. Kana zvirizvo uye mese makanganisa, saka ndinongokukwazisai ndichinyemwerera. Kune rimwe divi, ini ndinonzwa ndinosungirwa kuita mubvunzo, chimwe chinhu chingafarire iwe: ungade here kuve nemukana wekuisa JingDE pane yako sisitimu yekushandisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » JingOS "haisi sisitimu inoshanda." Tichaona JingDE munguva pfupi?
Ini ndinowana iyo JingTab A1 piritsi yakanyanyisa uye inonakidza neiyi OS, iyo yakavakirwa paUbuntu inoita kunge yakabudirira.
Konquest: yakapusa vhidhiyo mutambo wekukunda magaraxies
Star Wars Jedi: Yakawa Order yemahara paGoogle Stadia Pro